Nafiso”Waan Necbahay Ninka Astamahan Yeesha Xiliga galmada Sariirta”. - iftineducation.com
Nafiso”Waan Necbahay Ninka Astamahan Yeesha Xiliga galmada Sariirta”.
iftineducation.com – Dumarka waa kuwa kala sheegi karo ninka sida fiican ugu raaxeyn kara iyo mida aan waxaas aqoon waayo dumarka waa halkii laga guuri lahaa marka hwosha galmoodka ay timaado maxaa yeelay raga waxaa ay yihiin kuwa inta badan aan arimahas aan sii aqoon marka laga reebo kuwa horay jab badan ula soo kulmay.
Nafiso waa gabar Soomaliyeed taas oo ka hadashay dareenka dhabta ninka siiya iyo ninka aad dareenka dhabta anan siin waxaa ay sheegaty in ay aad u necebtahay ninka ay ku aragto ilaa dhowr arimood marka lagu guda jiro xiliga sariita ama xiliga wasmada qofba sidii uu u yaqaan.
Aniga figrada ahanteyda ma jeceli ninka horay ka biyo baxa marka la gaaro xiliga wasmada sidoo kale macjeli ninka horay guska iga galiya isagoo ii raaxeyn ma jecli ninka markii uu igu biyo baxo horay guska igala baxa waayo waxaa dhici karta in anan waliga aniga baiyo dhicin marka waxaan jeclahay in guska la igu haayo ilaa dhowr daqiiqo.
Marka hadii aad tahay ninka rag waxaa laga rabaa in aad arimahas aad iska ilaaliso.